သင်၏ Android ကို HTC One M9 မည်သို့ပြောင်းလဲမည်နည်း Androidsis
သင်၏ Android ကို HTC One M9 မည်သို့ပြောင်းလဲမည်နည်း
Francisco Ruiz | | Android application များ, HTC က, လဲ tutorial
HTC သည်၎င်းကိုစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်အသစ်၏မျှော်လင့်ထားသည့်ရောင်းအားကိုမျှော်လင့်နိုင်သည် HTC One ကို M9, မျှော်လင့်ထားသည့်အရာနှင့်ဝေးသည်သံသယဖြစ်စရာမလိုပါ ဒီနှစ် MWC15 မှာတင်ထားတဲ့အကောင်းဆုံး Android terminal တစ်ခု အရာဘာစီလိုနာမြို့၌မတ်လရဲ့အစမှာကျင်းပခဲ့သည်။ ၎င်းသည်များစွာသောအံ့မခန်းဖွယ်ကောင်းသော user interface အတွက်ဖြစ်သည် HTC Sense7နှင့်သူ၏ BlinkFeed.
ဒီလက်စွဲစာအုပ်အသစ်ထဲမှာ၊ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာပြမယ် သင်၏ Android ကို HTC One M9 အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပါရှုပ်ထွေးသောမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ကျော့ကျူလာများကိုလိုက်နာရန်မလိုပဲဤအရာအားလုံးသည် Root အသုံးပြုရန် (သို့) ပြုပြင်ထားသော Recovery ရှိရန်မလိုအပ်ပါ။ ထို့ကြောင့်ယခုသင်သိပါကသင်၏ Blinkfeed နှင့် HTC ၀ န်ဆောင်မှုများအပါအ ၀ င် HTC One M9 ၏ချီးကျူးထားသောမျက်နှာပြင်နှင့်အသွင်အပြင်ကိုပြချင်လျှင်ဤဆောင်းပါးကို "ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်" ကိုနှိပ်ပါ။
1 သင်၏ Android ကို HTC One M9 မည်သို့ပြောင်းလဲမည်နည်း
ပထမဆုံးလိုအပ်တာက ဤချုံ့ထားသောဖိုင်ကို zip ဖြင့် download လုပ်ပါ ငါလိုအပ်သမျှ apk ပါဝင်သည်ရှိရာ သင်၏ Android ကို HTC One M9 အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပါ,
ဤဇစ်သည်တစ်ချိန်ကဇစ်ဇစ် (zip) ကိုပြန်ယူပြီး၊ HTC One M9 ၏ထူးခြားသောနောက်ခံပုံများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်လိုအပ်သော apk အားလုံးပါ ၀ င်သောအခြားတစ်ခုပါရှိသည်။ အထူးသဖြင့်သူတို့ဖြစ်လိမ့်မည် apk format ဖြင့်အက်ပ် ၁၂ ခုရှိသည်HTC One M9 ၏ပင်မနှင့်၎င်းပါဝင်သည် HTC Sense ၅ y BlinkFeed၊ HTC ပြခန်း၊ HTC ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ HTC Widgets သို့မဟုတ် Facebook Twitter နှင့် Google+ plugins များပင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုရေးကွန်ယက်များမှသတင်းများကို Blinkfeed တွင်တိုက်ရိုက်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
ပြီးတာနဲ့ zip ကို unzipped ထားပြီး install လုပ်မည့် XNUMX apk ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ကို HTC One M9 အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပါကျွန်ုပ်တို့၏ Android ၏ Home ခလုတ်ကိုနှိပ်ရုံဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်နိုင်သည် Sense အိမ် နှင့်ငါတို့အကြိုက်က configure ။
ငါသည်ဤဆောင်းပါး၏ခေါင်းစဉ်ရှိဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုရန်၊ ကျွန်ုပ်၏ LG G2 ဖြစ်သည့် HTC One M9 ၏ကိုယ်ပွားပုံသဏ္seeingာန်ကိုမြင်ရုံသာမကဤလှပသော interface မှရရှိနိုင်သောဖြစ်နိုင်ခြေအားလုံးကိုကြည့်ရှုရန်အကြံပြုပါသည်။ ငါတို့ HTC Sense7နှင့် Blinkfeed.
ဒေါင်းလုပ် - HTC One M9 zip, ကြည့်မှန်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » သင်၏ Android ကို HTC One M9 မည်သို့ပြောင်းလဲမည်နည်း
Pako Guzman ဟုသူကပြောသည်
စိတ်မကောင်းပါ၊ ကျွန်ုပ် htc အကောင့်နှင့် ပတ်သတ်၍ ပြproblemနာရှိနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်မည်မျှပင်ထည့်သွင်းပါစေ၎င်းကထပ်မံဝင်ရောက်ရန်ကျွန်ုပ်အားတောင်းဆိုပါသည်။ တူညီသောအကြောင်းပြချက်အတွက် blink feed ကို၎င်း၊ ၎င်းကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်နည်းကိုကျွန်ုပ်မစစ်ဆေးနိုင်ပါ။ ဒါပေမဲ့၊ ကောင်းမွန်တဲ့လမ်းညွှန်၊ ဆဲလ်ကကြည့်ကောင်းတယ်၊ ငါ့မှာ 2013 moto g ရှိတယ်
Pako Guzman အားပြန်ကြားပါ
စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်းသည်အလွန်ကောင်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်တုိ့၏တုပနာရီနာရီနှင့်အလားတူသတင်းဖတ်စက်ကို htc တစ်ခုနှင့်တပ်ဆင်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်မှတ်သားထားသည်မှာကျွန်ုပ် terminal ကို format လုပ်သောအခါတစ်ချိန်ချိန်တွင်သင်၏ "HTC ONE" apk ကိုစမ်းသပ်လိမ့်မည်။ ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းငါကျွန်ုပ် htc one s တွင်ထည့်သွင်းလိုသည်၊ သို့သော်၎င်းကိုတပ်ဆင်ရန်ကြိုးစားသောအခါ၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအမှားကိုကျွန်ုပ်အားပြောပြသောအခါအထုပ်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရာတွင်ပြhelpနာ ရှိ၍ ကူညီပါ။
အမှန်မှာကျွန်ုပ်၌ LG G2 ရှိပြီး၎င်းသည်တကယ့်ကိုအေးမြပါသည်။ သို့သော်အထက်ပါလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နည်းတူသင့်အားအကြောင်းအရာများ၊ အသံများသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲမှုများကိုခွင့်မပြုပါက HTC အတွက် ပိုမို၍ စာမေးပွဲမတင်ပါ။ နောက်ခံ။
အမှားဆိုတာဘာလဲ၊ ဒါမှမဟုတ်ငါတို့အမှားလုပ်မိရင်အမှားဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဆိုတာငါမသိဘူး၊ ပြီးရင်ပြီးပြည့်စုံအောင်ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာမင်းကိုပြောရင်အကူအညီရလိမ့်မယ်။
သူတို့ကိုငါ galaxy s4 တွင်တပ်ဆင်ထားပြီးနာရီနှင့်ရာသီဥတုဝစ်ဂျက်များမတင်နိုင်ပါ၊ မည်သို့ဖြစ်နိုင်သနည်း။
Huawei ၏ Nexus တွင် ၅.၇ လက်မမျက်နှာပြင်၊ 5,7K resolution နှင့် Snapdragon2တို့ပါဝင်သည်
စမတ်ဖုန်းများအတွက် Nintendo ၏ပထမဆုံးဗီဒီယိုဂိမ်းသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်ခေါင်းစဉ် ၅ ခုနှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်မည်